A Theater where the Audience is in the Middle of the Action - McKnight Foundation
Tiyaatarka meesha Maqalka uu ku dhexjirey Dhexe ee Tallaabada
Forum for Foot Flying
Forum for Foot Flying waa firfircooni firfircoon oo dhiira gelin leh oo qallafsan iyo qoob-ka-cayaar leh oo leh qaabab kale oo badan oo muyuusik, qoob-ka-cayaar, iyo masrax. Kooxdu waxay doonaysaa inay dib u eegto suurtogalnimada suurtagalka dhammaan noocyada qoob-ka-cayaarka iyo qoob-ka-cayaareynta iyo si ay u sahamiyaan fursaddooda buuxda ee muusikada iyo muusikada.
Wax soo saarka dhawaan soo baxay Alice ee Wonderland wuxuu ahaa mid ka mid ah kuwa ugu wayn, ugu xooggan, kuwa ugu badan oo badan, iyo ficilada hal abuurka ah ee ay qabsadeen Forum Flying Foot Forum. Waxay ahayd waxqabad guul leh iyo dhacdooyin, farxad ay la socdeen dhagaystayaasha kuwaas oo qayb ka ahaa saddexdii toddobaad ee ugu dambeeyay ee magaalada St. Paul. Waxay samaysay Bogagga Magaalada liiska Tiyaatarka ugu fiican ee 2014 iyo qaylo dhaan adag.
Dadku waxay ku dhasheen Wonderland oo waxay dooran karaan meesha ay doonayaan inay ka tagaan oo ay ka soo qaataan meesha ay ka muuqanayaan bandhiga.
Waxyaabaha soo-saarka ayaa ahaa mid ka duwan waxkasta oo aasaasihii Joe Chvala arkay ama maqashay. Waxay ku riixday - iyo shirkadda oo dhan - siyaabo cusub oo looga fekerayo waxqabadka iyo sida ay ula xidhiidho fikradaha "dhacdo" iyo "bulsho." Waxay ahayd ka qaybqaadasho, dharbaaxayaal; waxay ka dhaqaaqdey meeshii u taagnayd, xitaa waxay ka bilaabantaa farsaaro dadweyne waxayna ku sii socotaa marinka wadiiqada Wonderland aduunka oo dhistay dhulka. Marka lagu dhex jiro goobta waxqabadka, bandhiggu wuxuu ka dhacay dhammaan agagaarka dhagaystayaasha. Dadku waxay ku dhasheen Wonderland oo waxay dooran karaan meesha ay doonayaan inay ka tagaan oo ay ka soo qaataan meesha ay ka muuqanayaan bandhiga.
Qayb kale oo khaas ah oo muujinaysa waxay ahayd qaybta ka qaybqaadashada. Barnaamijka "Flying Foot Forum" wuxuu ku lug lahaa xubnaha bulshada iyo ardayda afar dugsi oo kala duwan oo St. Paul ah kuwaas oo lahaa qaybo horay loo soo bartay oo muujinaya in seddex ilaa shan oo ka mid ah ay fulin doonaan habeenkii loo qoondeeyay-waxay ku dhow yihiin 50 arday oo ka mid ah 21-ciyaarood. 400 oo arday oo kale oo ka soo jeeda Saint Paul Conservatory of Performing Arts waxay soo bandhigeen bandhiga bandhigyada dugsiga gaarka ah.
Barnaamijka "Flying Foot Focus Forum", Barnaamijka "McKnight Arts Scholarship", wuxuu u qoondeeyey inuu balaadhiyo qeexidda iyo codsiyada qoob ka ciyaarka ciyaaraha. Waxay ujeedadoodu tahay inay u sheegaan sheekooyinka aan caadiga ahayn, abuurista jilayaal duurjoogta ah oo sahamiya fikradaha guud ee siyaabaha cusub iyo waxyaabo cusub oo xiiso leh. Sannadihii ugu danbeeyay, shirkadu waxay xoogga saartay iskaashiyo farshaxan iyo kuwo shahaadooyin ah. Shirkaddu waxay u samaysaa qaybo dhaadheer oo ku saabsan dalxiis waxayna u horseedaa waxqabadyo deganaansho oo ku saabsan gobolka Minnesota oo loogu talagalay dadka da 'kasta leh iyo awoodda qoob-ka-ciyaarka.